Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan Transfering Files
Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay Nokia. Akhri qodobkan, raacna Jidka fududahay in la sameeyo xiriir kala iibsiga Android inay Nokia. Read More >>
Posted by Thomas Jones | 11.11.2015
Ma doonaysaa in ay gurmad Nokia xiriirada, video, SMS, music iyo ka badan si uu PC? Dhib ma leh. Maqaalka aad bixisaa laba software si sahlan loo isticmaalo in aad u caawin karto. Read More >>
Sidee baad u files ka phone bedeli karaa telefoonka? Read this article oo aad ka heli doonto jawaab wanaagsan. Read More >>
Bal aan eegno laba siyaabood oo fudud oo kaa caawin kara in aad xogta ka phone Windows wareejiyo qalabka Android lacag la'aan ah. Read More >>
Posted by Selena Lee | 04.11.2015
Aad Xaaladdan oo aan diyaar u yihiin inay ku qaataan, waxaa jira siyaabo yar ay kala iibsiga Data. Read More >>
Posted by Selena Lee | 16.10.2015
Badan photos yihiin badbaadiyey on your computer oo aadan sugi karin in ay sawiro wareejiyo iPad? Halkan, waxaan ku siin hab fudud in aad nuqulka sawirada. Read More >>
Ma ku kaydsan xaddi badan oo data sida music, sawiro iyo xiriirada aad kombuutarka oo aad rabto inaad ka heli PC ah in suuqa kala iibsiga iPhone si ay kuu caawiyaan. Halkan ka mid yahay mid aad uwanaagsan. Read More >>
Article waxa ay diiradda saaraysaa kuu sheegaysa hab fudud si ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia in Nexus 5. u akhri oo ay leeyihiin isku day ah. Read More >>
Qorshee si ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah ka telefoonada jir in aad macruufka 7, laakiin aadan aqoon sida? Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida SMS si ay u gudbiyaan duug ah orodka telefoonka ee macruufka, Android, Symbian in macruufka 7. Read More >>
Posted by Emma Shaw | 14.10.2015
Ma doonaysaa inaad kala soo baxdo Senuti for Windows PC inuu ka soo kabsado music, playlists, iyo videos ka iPod ama iPhone? Eeg Senuti soo socda ee Windows dhigma. Read More >>
Senuti u Mac ka dhigayaa mid aad u fudud u isticmaala Mac in aad nuqulka music ka iPod iyo iPhone in Lugood Library on Mac. Read More >>
Tansee iPhone Transfer SMS caawisaa dadka isticmaala si SMS ka iPhone ah wareejiyo computer ah. Dheeraad ah oo ku saabsan faahfaahinta iyo Tansee iPhone Transfer oo kale ah waa in ay ka baro. Read More >>
Maqaalkani waxa aad bixisaa hab sahlan oo aad ha music ka iPod wareejiyo HTC Mid ka mid ah hal click. Read this article oo isku day inaad naftaada. Read More >>
Maqaalkani waxa uu idin ​​tusiyo 2 jid oo sahlan oo ku saabsan sida loo sawiro ka iPod wareejiyo iPad, iyo iPad in iPod. Read More >>
Maqaalkani waxa uu ku tusaysaa sida ay u guuraan maktabadda iPhoto meel cusub ama computer u gurmad ama kala iibsiga ujeedada. Read More >>
Beddelidda telefoonka ah waa wax fudud, laakiin waxyaabaha ku jira mid ka mid phone wareejiyo kale soo baxday in ay kala duwan, halkan waxaa u sheegto si fudud oo aad jidkiisa andsafe Read More >>
Haddii aad rabto in lagu wareejiyo videos ka iPhone oo aan Lugood, waxaa jira liiska 3 siyaabood ee aad codsan kartaa:. ICloud, qalab desktop-saddexaad, ama qalab Cloud ku salaysan Read More >>
Ma doonaysaa si ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah ka Android inay ka heli PC laakiin aan jid lahayn? Ha welwelin. Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah ka Android inay PC si fudud. Read More >>
Ma ogi sida ay u gudbiyaan videos ka fiidiyo ugu computer? Saddex doorasho: cable USB, 1394 firewire iyo akhristaha card. Ama waa u fududahay in ay ku xidhmaan fiidiyo ugu computer. Read More >>
SMS ka iPhone si Mac: buuxa hagahan kuu sheegayaa sida ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah ka iPhone si Mac ama Windows PC u gurmad. Read More >>